Liven: Tora uye Bata neVose Vanopinda Pane Yako Inotevera Chiitiko | Martech Zone
Liven: Tora uye Bata neVose Vanopinda Pane Yako Inotevera Chiitiko
Svondo, Zvita 31, 2017 Muvhuro, Ndira 1, 2018 Douglas Karr
Paunenge uri mutauri, rimwe rematambudziko makuru auinaro nderekuziva kuti ndiani anga aripo pachirongwa chako kuti ugokwanisa kuzoteverawo mushure. Kune vanoenda, zvinowanzo kushungurudza kuti iwe haugone kutevera pamwe nemharidzo munharaunda. Vatauri vanowanzopa kero yeemail apo vanoenda vanogona kunyorera ivo email nekukumbira iyo slide deck Dambudziko nderekuti kazhinji kunonoka. Vapindi vanobva, kanganwa email kero, uye haugone kubatana mushure memusangano.
Liven inoyevedza webhu-yakavakirwa nhare yekushandisa iyo inoshandura zvese izvi.
Vapindi Vanopinda Chiitiko Kodhi
Ona iyo Musangano Agenda
Wona iyo Mharidzo uye Gara neMutauri
Ini munguva pfupi yapfuura ndakashandisa chikuva pachiitiko chandakabata mudunhu. Chiitiko ichi chaive chemahara uye chakavhurwa veruzhinji, asi zvaive zvakakosha kuti ini ndiwane ruzivo rwekuonana rwevange varipo kuti ndikwanise kubatana navo kuitira zviitiko zvenguva yemberi. Zvakare, isu tanga tine yakavhurika Q&A pani pachiitiko, uye isu taida kupa nzira iri nyore kune vaipinda kuti vabvunze mibvunzo.
ne Liven, isu takapa yedu ajenda uye Powerpoint mharidzo. Liven akagadzirisa kodhi yechiitiko uye akaburitsa masiraidhi edu. Zvakanakisisa pane zvese, isu taisafanirwa kumhanya Keynote kana PowerPoint; isu takangonongedza hombe screen browser kune chiitiko chiitiko. SaMuratidziri, tinogona kufambisira mberi masiraidhi edu munharaunda patakange tapinzwa muchikuva… zvese kuburikidza neInternet. Yakashanda zvisina mhosva. Semukurukuri, takatoziviswa papeji redu pakabvunzwa mubvunzo! Ipuratifomu yacho zvakare inopa yekutevera-kuongororwa kwevanopinda.
Nekuichengeta nharembozha yewebhu webhu, pakanga pasina kurodha pasi kana nyonganiso - ini ndakangokumbira munhu wese kuti aburitse yavo smartphone, vhura browser kuLiven.io, uye vopinda yavo yechiitiko kodhi. Hapana akange aine nyaya kunyoresa uye kuvhura chiitiko. Zvakanakisisa pane zvese, isu takabuda kunze kwechiitiko neruzivo rwekuonana rwevanhu vese varipo. Zvino, kana isu tikaronga chiitiko chedu chinotevera, isu tine yedu email runyorwa kutumira chiyeuchidzo zvakare!
Liven kutanga uye muvambi, Mike Young, anotsigirwa nechikwata chinoshamisa pa DeveloperTown. Vari kufamba nekukurumidza neshanduko uye nekushandisa mitsva maficha mwedzi wega wega. Iwe unogona kugadzira yako yekutanga chiitiko ikozvino uye tora chikuva cheyedzo drive! Kana iwe uchida kuratidzira chikuva izvozvi, isa kodhi TST.
Gadzira Yako Liven Chiitiko
Tags: vanopindakutora kunyoresazvishandiso zvemusanganochiitikorejista yechiitikokunyoresa chiitikonhare yemagetsinharembozhanhare mbozha webhu
Wideo: Gadzira Mhuka Vhidhiyo Pamhepo
Infographic: Pfupi Nhoroondo yeSocial Media Kushambadzira